Ngathi-iNanchang Biotek Medical Technology Co, Ltd.
I-Nanchang Biotek Medical Technology Co, Ltd. Code Ikhowudi yeStock: 831448 a lishishini elinobuchwephesha obuphezulu, elikhethekileyo kwimveliso, iR & D kunye nentengiso yeemveliso zeanesthesia. Umzi-mveliso wethu omtsha ubekwe kwiPaki kaZwelonke yezoNyango kunye nePharmacy, uMmandla woPhuculo oluPhezulu lwe-Nanchang, ohlanganisa i-33,000 yeemitha zesikwere. IBiotek inolawulo oluphezulu, iR & D kunye neqela lobuchwephesha. Sihambele phambili kwitekhnoloji yokuhlola kunye namagumbi acocekileyo, anamava aqinileyo okuvelisa. Inkampani yethu inikwe isatifikethi solawulo lwekhwalithi ye-ISO 13485 kunye nesatifikethi se-CE kunye nokuqinisekiswa kwe-USA FDA. Sinezinto ezininzi zobunikazi, ngokujolise kwiimveliso ze-anesthesia kuqhaqho lweklinikhi.
Inkampani yethu iqale ishishini kwimveliso yeanesthesia yeemveliso zangaphambili kwixa elidlulileyo ukuya kwimveliso yeanesthesia ephambili kunye nezixhobo zokonga okwangoku. Uluhlu lweemveliso ze-anesthesia zibandakanya: Ipompo yeLusisi yokuNcitshiswa, i-Laryngeal Mask Airway, iTracheal Tube, iThubhu ye-Endotracheal eQinisekisiweyo, IsiChobo sokuPhefumla, Isihluzi seNkqubo yokuphefumla, iMask yokubulala iintlungu, iLaryngoscope elahlwayo yeVidiyo, iVidiyo yeLaryngoscope, i-Disposable Anesthesia Kit, i-Disposable Central venous Catheter ivuliwe. Uluhlu lweemveliso zokonga lubandakanya: IV Cannula, Foley Catheter, Uxinzelelo lwegazi Transducer njalo njalo.
Ngefilosofi yeshishini ye "Umgangatho Wokuqala, Inkonzo ePhambili" kunye nomoya weshishini "wobumbano kunye nokuthembeka, ukuhlola nokuqamba", iBiotek iyaqhubeka nokuzinikela ekubeni "lelona shishini linokuthenjwa elinikezelwa zii-anesthetists kwihlabathi liphela". Siyakholelwa ngokuqinisekileyo ukuba uphando kunye nezinto ezintsha zizinto ezikhuthazayo kuphuhliso lweshishini, kwaye umgangatho wemveliso ungamandla okuxhasa ukukhula kweshishini.
Inkampani yethu yamkela ngokunyanisekileyo bonke abathengi abavela ekhaya nakumazwe aphesheya ukuba batyelele umzi-mveliso wethu kwaye baxoxe malunga nokusebenzisana kunye nokuphuhliswa kwemveliso yezonyango.